Digital Marketing Knowledge | Open Your Business Online
ကြော်ငြာထုတ်တဲ့အခါ ဒေါ်လာကုန်ရကျိုးနပ်ဖို့ အသက်သာ အထိရောက်ဆုံး audience၊ ကြော်ငြာစာ၊ ဒီဇိုင်းတွေကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပိုသက်သာထိရောက်တဲ့ ကြော်ငြာစာ၊ ဒီဇိုင်းတွေကို သိရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? Audience တွေကြားမှာ ပိုအဆင်ပြေတာကို ဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်မလဲ? ဒါကို အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ သိရှိနိုင်ဖို့ Campaign Budget Optimization ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Campaign Budget Optimization (CBO) ဆိုတာဘာလဲ? CBO ဆိုတာ Campaign တစ်ခုမှာ အသုံးပြုတဲ့ Budget ကို မတူညီတဲ့ ads set တွေမှာ ရလဒ်အလိုက် အလိုအလျောက်ခွဲခြမ်း အသုံးပြုပေးတဲ့ option တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Ads Manager ရဲ့ Campaign Level မှာ […]
8 Advantages of Ecommerce to your Business in Myanmar (သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Ecommerce ရှိခြင်းရဲ့ အားသာချက် 8 ချက်) သင့်အပြင်မှာ ဆိုင်ခန်းဖွင့်ထားတယ်၊ Facebook Page ရှိတယ်၊ ကြော်ငြာထုတ်ပြီး ရောင်းရနေတယ်၊ ဒါကို လုံလောက်ပြီလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ထင်နေတာက လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ သို့ပေမယ့် များမကြာမီ အချိန်အတွင်းမှာ သင့်အနေနဲ့ Ecommerce Website တစ်ခုကနေ ဗဟိုပြုရောင်းချနိုင်ဖို့ မပြင်ဆင်ထားဘူးဆိုရင် သင့်ပြိုင်ဘက်တွေထက် နောက်ကောက်ကျကျန်ခဲ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Stay Home ကာလအပြီးမှာ လူတွေရဲ့ Online ကနေ ဝယ်ယူကြတဲ့ အလေ့အကျင့်က ပိုပြီးအားကောင်းလာပါတယ်။ Online အသုံးပြုတာ ပိုမိုကျွမ်းကျင်လာကြပြီး Website တွေကနေ […]
What is Ecommerce Website in Myanmar? How Ecommerce works for you? What is an Ecommerce Website? One Sentence Definition Ecommerce Website ဆိုတာ အင်တာနက်မှတဆင့် ကုန်ပစ္စည်း / ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Ecommerce ကို Electronic Commerce, Internet Commerce လို့လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Ecommerce ကို အောက်ပါစကားလုံးအမျိုးမျိုးနဲ့ ရေးသားနိုင်တာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ecommerce e-commerce E-commerce E-Commerce Ecommerce How Ecommerce Website Works in Myanmar? Ecommerce […]
သင်အခုချိန်ထိ Website မရှိပေမယ့် လုပ်ငန်းကို အဆင်ပြေပြေ လုပ်လို့ရနေတာပဲ။ ဒါဆို ဘာကြောင့် Website လိုအပ်အုံးမှာလဲ? လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် Website ဆိုတာ အရင်ကတည်းက လိုအပ်ခဲ့တာမှန်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေက Google မခေါက်ကြဘူး၊ Facebook အသုံးများတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ရှိနေပါသေးတယ်။ သို့ပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ လူတွေ အပြင်မထွက်ဘူး၊ ဖုန်းပိုသုံးလာတယ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေနဲ့ ပိုပြီး အသားကျလာတယ်၊ ပိုရင်းနှီးလာတယ်၊ ပိုကျွမ်းကျင်လာကြပါတယ်။ အခုသုံးစရသွားတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ ပိုသုံးလာဖို့၊ ပိုကျွမ်းကျင်လာကြဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဒီအခါမှာ Google Search တွေနဲ့ Website Ranking တွေက အရေးပါလာတော့မှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ Ranking ကောင်းဖို့ဆိုတာ အချိန်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အခုချိန်မှာကတည်းက Website တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး […]
Digitalized Search Engine Optimization
SEO လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်နားလည်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပဲ လုပ်ဆောင်လို့မရပါဘူး။ SEO တစ်ခုလုံးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိနားလည်ထားဖို့၊ သဘောပေါက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် SEO ကို On-page နဲ့ Off-page လို့နှစ်ပိုင်းခွဲခြားနိုင်ပြီး တစ်ခုစီမှာပါဝင်တဲ့ သိထားသင့်သမျှကို ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ On-page SEO မှာဘာတွေပါဝင်လဲ? On-page SEO မှာတော့ သင့် Website ရဲ့ Search Ranking နဲ့ Position ကိုတိုးတက်စေဖို့ Website အတွင်းမှာ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ တိုင်းတာဆောင်ရွက်ချက်တွေ အကုန်ပါဝင်ပါတယ်။ Keywords Keywords ဆိုတာ သင့်ကာစတမ်မာတွေ Search Box မှာလာရိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေ၊ စကားစုတွေ၊ စာကြောင်းတွေ၊ မေးခွန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – How to […]
10 Types of Digital Marketing and How to use them
Digital Marketing Types တွေအားလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ပြီး လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မှသာ သင့်ပြိုင်ဘက်တွေထက် ခြေတစ်လှမ်းသာနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
How to do Market Research for Myanmar Audience (Free Template Include)
Digital Marketing လုပ်တဲ့အခါ အရင်ဆုံး သင်ဦးတည်ဈေးရောင်းမယ့် ဝယ်သူတွေကို Market Research လုပ်ပြီး Myanmar ရေ‌မြေနဲ့ကိုက်တဲ့ နည်းဗျူဟာကို ဖန်တီးဖို့လိုပါတယ်။
Complete Digital Marketing Process in4Simple Steps
ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် Digital Marketing လုပ်တော့မယ်၊ ဘယ်ကစရမလဲ။ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ရှုပ်ထွေးနေသူတွေအတွက် Digital Marketing Process အစအဆုံးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။